बिज्ञान प्रबिधि Archives - ताजा समाचार
Oct22019 by ताजा समाचारNo Comments
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले ३२ जिल्लाका ५० भन्दा बढी शहरमा चौथो पुस्ताको फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग स्विच दबाएर फोरजी प्रविधिमार्फत ‘भिडियो कन्फरेन्स’ गरी सेवा शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभयो । टेलिकमले यसअघि २०७३ साल पुस १७ गतेदेखि काठमाडौँ र पोखरामा फोरजी सेवा उपलब्ध गराएको थियो । टेलिकमले बढी व्यावसायिक र व्यापारिक कारोवार हुने तथा बढी जनघनत्व भएका स्थान चयन गरेर सेवा विस्तार गरेको हो । त्यसका लागि करीब १५० भन्दा बढी स्थानमा बिटिएस टावर जडान गरिएको छ । सातै प्रदेशका मुख्यमुख्य शहरमा फोरजी सेवा विस्तार गरिएको छ । प्रदेश नं १ को चन्द्रगढी, विर्तामोड, दमक, विराटनगर, इनरुवा, धरान र धनकुटामा फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएको छ । यस्तै प्रदेश नं २ को जनकपुर, जलेश्वर, मलङ्गवा, बारा, पर्सा, सिमरा, कलैया र गौरमा पनि सेवा श
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ५ सरकारले इ–सेवाबाट हवाई टिकट काटी कारोबार गरेमा कारबाही गर्ने भएको छ । एक सूचना जारी गर्दै प्रदेश नम्बर ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति नलिइ इ–सेवाबाट हवाई टिकट काटी व्यवसाय गर्नेलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ । सूचनामा पर्यटन ऐन २०७६ दफा ११ को उपदफा १ बमोजिम ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी नखोली इ–सेवा लगायतका इ–टिकेटिङबाट हवाई टिकेटिङको कारोबार गरेको पाइएमा २० हजार जरिवाना सहित कारोवार बन्द समेत हुने छ । मन्त्रालयले इजाजत लिएर हवाई टिकेटिङको कारोबारमा इजाजत नलिइकन कानूनतः अबैधरुपमा कारोबार गरिरहेका व्यक्ति, संघ–संस्था तथा फर्मलाई अवैध रुपमा कारोवार नगर्न भनेको छ ।
तपाईले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल अर्कैको नाममा दर्ता त छैन ? यदी अर्कैको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने समयमै आफ्नो नाममा नामसारी गर्नु राम्रो हुनेछ । त्यसका लागि आवश्यक कागजात सहित सम्बन्धित दूरसञ्चार कम्पनीका कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल टेलिकमले छिट्टै नाम दर्ता भएको सिम सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै चलाउन पाउने नियम ल्याउन लागेको छ । नमस्ते पोष्टपेड मोबाइल नम्बर नामसारी गर्नुपर्ने भएमा दुबैजना परिचयपत्र (नागरिकता तथा राहदानी) सहित स्वयम् टेलिकमको कार्यालय पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ५६५ रुपैयाँ स्वामित्व शूल्क र ११३ रुपैयाँ नामसारी शूल्क लाग्ने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । कसरी थाहा पाउने ? नेपाल टेलिकमका लागि scode टाइप गरी १४१५ म्यासेज गरेर तथा एनसेलका लागि *9966# डायल गरी आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल नम्बर कसको नाममा दर्ता छ थाहा पाउन सकिन्छ ।
Sep182019 by ताजा समाचारNo Comments
एक सय रुपैयाँमा नेपाल टेलिकमको ३ जीबी डाटा प्याक, लिने तरिका यस्तो छ
काठमाण्डौ – संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमले एक सय रुपैयाँमा ३ जीबी डाटा प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो डाटा प्याकेज लिएर निरन्तर तीन दिनसम्म प्रतिदिन एक जीबीका दरले जम्मा ३ जीबी डाटा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध गराइएको हो । यो सुविधा असोज १ गतेदेखि १५ गतेसम्म उपलब्ध छ । यस योजनामा सहभागी हुनका लागि *1415*3# मा डायल गर्नुपर्छ । यसका साथै 3D1G लेखेर १४१५ मा सन्देश पठाएर वा नेपाल टेलिकम एपमार्फत पनि यो सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
Sep122019 by ताजा समाचारNo Comments
यी हुन् १८ वर्षकी किशोरी । बुबाआमाले मोबाइल चलाउन पनि भर्खरै मात्र दिएका थिए । भर्खरभर्खर स्मार्ट फोन चलाउन पाएपछि मानिसहरु फोनमा झुण्डिने नै भए । नेपालगञ्जकी मिना नेपाली (नाम परिवर्तन) को दिनचार्य पनि अधिकांश समय स्मार्टफोनमै बिताउने थियो । भर्खरभर्खर फेसबुक चलाउन सुरु गरेकीले फेसबुकमै रमाउन थालेकी थिइन् मिना । यहीबीचमा सुनिल थापा नाम गरेका एक युवकले मिनालाई फेसबुकमै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछन् । ह्यान्डसम युवकको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएपछि प्रोफाइल हेरेर मिनाले रिक्वेस्ट एसेप्ट गरिन् । ती युवक थिए कोहलपुरकै सुनिल थापा भन्ने सुनिल नेपाली । २१ वर्षका सुनिल नेपाली हेर्दा पनि सुन्दर देखिन्थे । फेसबुकमा साथी बनेपछि मिना र सुनिलको नियमित कुराकानी र भिडियो च्याटसमेत हुन थाल्यो । मिना नेपालगञ्जकी र सुनिल कोहलपुरको भएकाले पनि उनीहरुबीच लामोलामो कुराकानी हुन थाल्यो । चिनचान भएको करिब एक म
काठमाडौँ । ठगीका बिभिन्न बिधिहरु अपनाउंदै आएका भारतीय ठगहरुले पछिल्लो समय भाइवरलाई नेपाली ठग्ने साधनको रुपमा प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ । यसरी ठग्न उनीहरुले एउटा भ्वाइस म्यासेज तपाइलाई पठाउन सक्छन् जसमा तपाइले ५० लाख भारतीय रुपयाँ र १० तोला सुन भाइवर कम्पनीबाट उपहारमा प्राप्त गरेको जानकारी दिइन्छ । आर्थिकन्युजलाई प्राप्त यस्तो सन्देशमा ‘भाइवर कल सेन्टर युएसबाट देवराज मलहोत्राले सर्वप्रथम तपाइलाई अभिवादन गर्दै भन्छन् – नमस्कार ! त्यसपछि शुरु हुन्छ उनको तपाइलाई लोभ्याउने कुरा । त्यहाँ भनिन्छ– तपाइले जुन भाइवर नम्बर प्रयोग गरिरहनु भएकोछ त्यो पुरस्कारको लागी छनौट भएको छ । तपाइले ५० लाख भारु र १० तोला सुन प्राप्त गर्नु भएको छ । तपाई र तपाइको परिवारलाई धेरै धेरै बधाई छ । यो छनौट प्रक्रियामा भारत, नेपाल, भुटान, दुबई र पाकिस्तान गरी पाँच वटा मुलुक सामेल गरिएका छन् । छनौट प्रक्रियाबारे
Sep102019 by ताजा समाचारNo Comments
महँगो मोबाइलको स्क्रिनमा फोहोर लाग्ने, दाग बस्ने, कोरिनेजस्ता समस्या हुन्छन् । यस्ता समस्याले स्क्रिन नै नराम्रो देखिन्छ । तर, मोबाइलको स्क्रिनको केही ट्रिटमेन्ट गरे टलक्क टल्किएर नयाँजस्तै देखिन्छ । सफा गर्ने केही तरिका यस्ता छन्ः – फोनको स्क्रिन कभरमा दाग बस्यो या स्क्र्याच भयो भने टुथपेस्टको सहयोग लिनुहोस् । स्क्र्याच भएको स्थानमा टुथपेस्ट लगाएर नरम कपडाले पुछ्दा स्क्र्याच हट्छ । बेकिङ सोडा प्रयोग गरेर पनि मोबाइलको स्क्रिन सफा गर्न सकिन्छ । बेकिङ सोडालाई पानीमा मिलाएर पेस्ट बनाउनुहोस् । पेस्ट थोरै–थोरै गर्दै एउटा हल्का कपडामा लगाउँदै दाग बसेको तथा कोरिएको ठाउँमा गोलो आकारमा रगड्नुहोस् । दुई–तीनपटकसम्म यो प्रक्रिया दोहो¥याउँदा स्क्रिन नयाँ देखिन्छ । विचार गर्नुहोला, पेस्ट पातलो बनाउनुहुन्न । स्क्रिनभित्र पेस्ट प्रवेश गर्न नपाओस् । स्मार्टफोनको स्क्रिन सफा गर्न खानेतेल पनि प्
Sep92019 by ताजा समाचारNo Comments
एजेन्सी– भारतको गुजरातमा अविवाहित युवतीहरुमाथि मोबाइल बोक्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गुजरातको जाललो गाउँको ठाकोर समुदायले अविवाहित युवतीहरूलाई मोबाइल बोक्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यस समुदायले अविवाहित युवतीहरूले मोबाइल बोक्नु उचित मानेको छैन । जालोल गाउँका ठाकोर समुदायका मानिसहरूले पञ्चायत बोलाए । पञ्चायतले आफ्ना समुदायका अविवाहित युवतीहरूलाई मोबाइल बोक्न रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । गाउँवासीहरू पञ्चायतको यस आदेशलाई आफ्नो संविधान सरह मान्छन् । पञ्चायतमा समुदायका मानिसहरू आफ्ना लागि आफैं नियम तय गर्छन् । यो नयाँ नियमअनुसार अविवाहित युवतीले मोबाइल फोन राखे भने ठाकोर समाजको नियम उल्लंघन गरेको मानिने छ । यसलाई अपराधका रूपमा लिइने छ । यदि कुनै अविवाहित युवतीबाट मोबाइल बरामद भएको खण्डमा उनका पितालाई जरिमाना गरिने छ । जरिमाना स्वरूप १ लाख ५० हजार भारू पञ्चायतला
Sep52019 by ताजा समाचारNo Comments
काठमााडौं । अब अरुका नाममा भएको सिमकार्ड प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ। जसले प्रयोग गरिरहेको हो, उसैको नाममा सिमकार्ड दर्ता गर्न बाध्यकारी गर्ने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तयारी छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जारी भएका सबै सिम सम्बन्धित प्रयोगकर्ताकै नाममा आगामी तीन महिनाभित्र दर्ता गरिसक्ने योजना बनाएको बताए। ‘केही दिनमै हामी मोवाइल सेवा प्रदायकमार्फत् सबै प्रयोगकर्तालाई अरुका नाममा भएको सिमकार्ड प्रयोग गरिरहेको भए आफ्ना नाममा ल्याउन म्यासेजमार्फत खबर गर्छौं,’ उनले भने। तोकिएको समयमा पनि आफ्ना नाममा सिम दर्ता नगर्नेलाई के गर्ने भन्ने निर्णय भने भइनसकेको उनले बताए। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपाल टेलिकमबाट असारसम्ममा २ करोड २ लाख सिमकार्ड जारी भएका छन् भने एनसेलले एक करोड ६६ लाख सिमकार्ड जारी गरेको छ।